Mayelana NATHI | I-Amso Solar Technology Co., Ltd.
I-Amso Solar Technology Co., Ltd.ingumkhiqizi wamapaneli elanga athuthukiswe ngaphezu kweminyaka eyi-12. Sinokuhlangenwe nakho okugcwele kuzo zombili izinsizakalo ze-OEM ne-ODM. Eminyakeni edlule, Sisungule izinkampani eziqinile ezinemikhiqizo eminingi kanye nabakhiqizi bethimba elilodwa. Sasungulwa ngokusemthethweni ngo-2017 ukuletha umkhiqizo wethu: Amso Solar. Imboni yethu iseduze neHongZe Lake enhle, eseHuaian, JiangSu, China.
I-Amso Solar igxile ekukhiqizweni kwamaseli elanga namapaneli elanga aqinisekiswe yimvume yethu yeminyaka engama-25. Imigqa yethu yokukhiqiza amapaneli elanga imboza uchungechunge lwe-5BB ne-9BB, uhla lwamandla kabanzi kusuka ku-5w kuye ku-600w, futhi iphetha ngamapaneli elanga afanelekile, afane namaphaneli elanga afanelekile nama-panels wesigamu seseli. Ngokombono wosayizi weseli, sisebenzisa amaseli amathathu abalulekile elanga ekukhiqizweni kwamapaneli elanga: M2 156.75mm, G1 158.75mm, neM6 166mm.
Ukwanelisa isipiliyoni sokuthenga esisodwa samakhasimende, sithuthukise ibhizinisi eliqhubekayo lokuphakela izingxenye zesistimu yelanga, njenge-PWM ne-MPPT isilawuli, i-lead-acid, i-gel ne-lithium battery, i-off-grid kanye ne-in-grid inverter, amakhithi wokufaka. Khonamanjalo, futhi sinikezela ngokuqamba konke kobungcweti nokusabalalisa insizakalo yesistimu yamandla elanga eboshwe ngegridi nangaphandle.
Ukuze sihlole imakethe yomhlaba, sithole izitifiketi ezithile ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zeziqu ezifana ne-CE, TUV, CQC, SGS, CNAS. Sigcina umbandela osezingeni eliphakeme wokukhethwa kwezinto zokwakha, wethula imishini esezingeni eliphakeme emhlabeni jikelele, futhi senza ngokuqinile uhlelo lokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo ngamunye ovela ku-Amso Solar ufanelekile. Amandla wethu wamamojula waminyaka yonke afinyelela kuma-megawatt ayi-1 0 0. Izimakethe zethu ezinkulu zakhiwe ezifuywayo, i-Southeast Asia, i-Europe kanye ne Mid-East.
Umbono wethu ukusabalalisa ukusetshenziswa kwamandla elanga nokwenza ukusetshenziswa kwale nsiza evuselelekayo kwenzeke. Siyakholwa ukuthi ukusebenzisana kwebhizinisi kufanele kulethe izinzuzo ezifanayo futhi kufanele kufune ukubambisana kwesikhathi eside. I-Amso Solar ifune ngobuqotho uphenyo lwakho futhi ilungele ukunikeza izixazululo zamandla elanga ezobuchwepheshe.